बिचार – Page4– Rajdhani Daily
खेमराज निरौला समुदायद्वारा समुदायकै लागि सञ्चालित समुदायको पूर्ण व्यवस्थापनमा रहेको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई सामुदायिक अथवा पब्लिक क्याम्पस भनिन्छ । सामान्यतया पब्लिकको अर्थ राज्यद्वा...
खुलामञ्च अतिक्रमण बन्द गर
भूमाफियाको बिगबिगी चलिरहेका बेला राजधानीको मुटुमा रहेको खुलामञ्च पनि अतिक्रमण हुँदै गएको छ । यो अतिक्रमण प्रशासन र भूमाफियाबीच साँठगाँठका कारण हुन गएको हो । खुलामञ्च अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । यसम...
दसैंंको महिमा र सन्देश
डा.देवीप्रसाद आचार्य पूर्वीय दर्शनको सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाइने बडादसैं हिन्दू संस्कृतिको नसानसामा घुसेको महान् पर्व हो । शरद ऋतुको रौनकसँगै आउने यो पर्व घटस्थापनादेखि सुरु भएर कोजाग्रत पूर्णिमासम...
विलम्बमा बबई सिँचाइ
ढुनबहादुर बुढाथोकी दशकमै मुलुकमा कायापलट आउन सक्छ । तीन दशकमै सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, कोरियालगायत कैंयन देशको काँचुली फेरिएको छ । तर, हामी कहाँ तीन दशकमा एउटा सिँचाइ आयोजनासमेत पूरा हुन सकेको छ...
मासुका परिकार र दाँत
डा. प्रकाश बुढाथोकी चाडबाडमा सधैं गुनासो गर्ने आफन्त भन्छन्, ‘मेरो त दाँतमा आधा किलोजति मासु अडकिन्छ, अनि कटकट खान थाल्छ, के गर्ने डाक्टर बाबु ? मलाई त चाडवाड पनि किन आउँदो हो जस्तो लाग्छ ।’ सिने कलाक...
परिस्थितिको विकल्प खोज्नु जरुरी
श्रीकान्त रेग्मी नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा गरी अहिलेसम्म सातवटा संविधान प्राप्त गरिसकेका छन् । संविधानवादको सफल अभ्यास हुन नसक्दा यसरी बेलाबेला संविधान नै परिवर्तन भएका हुन् । प्रत्येक पटकका संव...
भागवत गीता, मनोविज्ञान र व्यक्तित्व विकास
सन्तोष खनाल मानिसको मन असाध्यै शक्तिशाली छ, ऊर्जाशील छ, गतिशील छ र बलवान् छ । मन आफंैमा एक विशाल ऊर्जाको खानी हो । तर, यो विशाल ऊर्जाको खानीलाई सदुपयोग गर्न सकिएन भने यसको दुरूपयोग हुन्छ । मन कहिल्यै ...
स्थानीय तहको सेवा खस्किन नदेऊ
संघीय शासन सफलताको मुख्य आधार मानिएको स्थानीय तहको काम दिन प्रतिदिन कमजोर हँुदै गइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि गम्भीर खालका प्रश्न उठिरहेका छन् । कर्मचारीले पनि जुन उत्साहका साथ काम...
तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन र कृषि योजना
कृष्णहरि बास्कोट गत साता रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले लगानी सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । सो सम्मेलनमा यस पंक्तिकारले कृषि विकासका सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका विचार अन्य पालिकाका लागि पनि उपयोगी हु...